Chives Span Kumanaan Sanadood ee Taariikhda Cuntada Adduunka
Macluumaadka Qaybta Ereyga Qayb ahaan
Taariikhda Cuntada ayaa sharaf leh Chive Varyatile
Chives waxay bixiyaan dhadhan qafiif ah oo basbaal ah iyo raali gelin ku saabsan roodhida
Chives, xubin ka mid ah qoysaska basasha ee u dhashay Aasiya iyo Yurub, waxay ahaayeen kuwo ku dhawaad ​​5,000 oo sano. Laakiin ma aysan si firfircoon loo beerin raashin ilaa qarniyadii dhexe. Magaca botanical, Allium schoenoprasum, ayaa ka soo jeeda Giriigga macnaha sida leek-leek . Magaca Ingiriisku wuxuu ka yimaadaa dhinaca galbeedka, taas oo macnaheedu yahay basal , taas oo markaa noqotey mid feker ah Faransiis.
Lagu qiimeeyo dhadhanka jilicsan, xubintaan ugu yar ee qoysaska basasha waxay leeyihiin ilma badan oo duurjoog ah oo sii kordhaya inta lagu gudajiro wareegga dhexe ee waqooyiga, oo ay ku jiraan jibbaarada iyo scallions .
Chives waxay ku koraan buunshaha sida cawska, waxay u diraan caleemo khafiif ah oo qoyan oo koraan ilaa 12 inji. Si ka duwan basasha caadiga ah, nalalka guluubka waaweyn ma jiro. Caleemuhu waxay bixiyaan dhadhanka, iyo karisyada caajisku waxay u daaweeyaan sidii geedo yaryar, iyaga oo ku daraya dhamaadka karinta si ay u ilaaliyaan dabeecadooda iyo midabkooda.
Warshad dilka ah, chives waxay samaysaa sheeko guul leh oo loogu talagalay beerta guriga, xitaa kuwa leh suxuunta madow. Waxay u koraan noocyada kala duwan ee carrada, waxay ku koraan dheriyo ama dhulka waxayna ku noolaan karaan heerkul-hooseeya-qaboojiyaha. Haddii aad kortaan, waxaad ku barakeysnaan doontaa guga iyo xagaaga oo leh ubaxyo casri ah oo u eg qaab jilicsan oo jilicsan. Kuwani waa mid la cuno oo wax lagu dhejiyo. Si kastaba ha ahaatee, ogsoonow in dhadhanka caleemaha chest ay noqdaan qadhaadh ka dib geedka ubaxa. Si looga hortago ubaxyada, caleemaha si joogto ah u ciribtir.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ganaaxyada ganaaxa ee cusbeyntii Faransiiska, nasiibku wuxuu si fiican u labanlaabay noocyada noocyada badmaaxiinta ah oo badanaaba waxay u yimaadaan sida quruxda maraqa kareemka.
Waxay si joogta ah u sameeyaan muuqaalo fara badan oo cunto ah sida cuntada loo kariyo iyo baradho macaan. Chives jilicsan ukunta iyo omelets iyo yihiin qurxinta caadiga ah ee blini. Waxay ku salaysan yihiin salad saliideed ah waxayna qurxinayaan baaquli qashin ah. Sida jaaliyadaha caanaha ah ee jiiska iyo labeen kareemka, waxay kor u qaadi karaan baradho cake ah oo la cuni karo oo cunto qafiif ah.
Si aad uhesho ilo macquul ah oo dhadhan leh, ku dar qasacda jilicsan ee la jarjaray subagga la jilicsan yahay, ka dibna gedhiga gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gaaban ilaa iyo inta ay ka soo baxayso, marinka la jarjarayo sida loo baahan yahay in la dhalaaliyo maraqa iyo khudaarta.
Waxaad iibsan kartaa chives-la qalajiyey sanduuqyada hawada, laakiin ma bixiyaan dhadhanka caleemaha casriga ah. Haddii aadan kari kari kari laheyn, u raadso jajabyo cusub oo lagu duubo geedo yaryar oo ku yaal dukaankaaga. Caleemuhu waa inay noqdaan kuwo dhalaalaya oo fir fircoon leh, oo daaqu waa inay noqotaa mid aan macquul ahayn. Waxay si fiican u duubaan tuwaal waraaqo ah oo ku dhex jira khudradda khudradda ee qaboojiyahaaga. Ka hor intaadan isticmaalin.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Chives
Diyaar ma u tahay inaad ku hesho feejignaantaada? Hubi kheyraadka kale ee khayraadka ah si aad wax badan uga barato:
• Doorashada iyo Kaydinta Chive
• Farqiga u dhaxeeya Chives iyo Chilli Chives - FAQ
• Talooyin Cunno Karinta
• Chives iyo Caafimaadka
• Cuntooyinka Chive
Waa maxay Monosodium Glutamate ama MSG?
10 Meelaha Lagu Sameeyo Hilibka Cagaarka Cagaaran
Lacag la'aan iyo lafo-Xam-Xum: Waa maxay Farqiga?
Ham-daweynta Xamirka: Habka Aging, Maaddada, iyo Diyaargarowga
Jacayl Cheese? Ku dukaamaan Dukaamada waawayn ee Dheeriga ah ee Dheeraadka ah
Lix Caleenta Noble
Ereyga Qayb ahaan
Dhabarka Bariga Bariga Dhexe
Mushaar soo kordhay
Astaamaha Cunnada Maraykanka
Macmacaanka Vegan No-Bake Key Lime Pie
Shukulaatada Shukulaatada Pumpkin
Geedka Gacanta Qamiis Beerka qadhaadhka qallalan Rashka
Salad Hilib Caano ah
Ka hor inta aadan soo iibsanin Fish ama Shellfish
Sida loo sameeyo Churros iyo Shukulaato
Butter, Mayonnaise ama Bacon Fat - Sida Loogu Sameeyo Hilibka Cuntada oo Fiican
Shillot iyo Shafo Cagaaran ah
Top 10 Cunto-jimicsi raaxo leh
Macmacaanka Tombo-Bambo Cajiib ah (Lecso)
Maple iyo Brown Sugar Turkey Brine